Chinyorwa chepamutemo chemavhidhiyo eiyo yapfuura WWDC 2016 yave kuwanikwa | IPhone nhau
Iyo yekuvandudza nharaunda ndeimwe yeakakosha mbiru dzekambani uye seuchapupu hweizvi zvatinoona Kufarira kwaApple kupurudzira nharaunda ino nguva dzose. Nezuro iyo Cupertino-based kambani yakavhura chikoro chekutanga kuti vadzidze maitiro ekuvandudza mafomu eIOS muNaples uye anozoshandira Europe yese, kunyangwe isingazoshanda kusvika muna Gumiguru.
Kune rimwe divi, isu tinowana mawekishopu anoitwa nekambani gore rega rega mukati megadziriro yeVashanduri Misangano, mune iyo kambani inopa zvese zvitsva zvemasisitimu anosvika kumusika mwedzi inotevera, munaGunyana seyakajairwa mutemo. Mune aya mashopu vanogadzira inogona kutaura ruoko rwekutanga nemaApple mainjiniya kugadzirisa zvinetso, kumutsa mibvunzo… Zvakare nekudzidza maitiro ekuvandudza nzira yavanoronga pane iOS.
Mavhidhiyo ese anoenderana neWWDC anowanikwa kuburikidza neWWDC application inowanika muApp Store, asi kana zvasvika pakuvabvunza hazvisi nyore sezvo uchifanira kutarisa vhidhiyo rese kuti uone kana zvirimo zvine chekushandisa. Zvayo, kambani inonyora zvinyorwa zvese zvemavhidhiyo kuitira kuti vanogadzira vagone kubvunza mazwi akakosha nekukurumidza kuti vaende akananga kuchidimbu kana chikamu chevhidhiyo inotifadza.
Kana semuenzaniso isu tichitsvaga watchOS 3 injini yekutsvaga Ichadzosera chinongedzo kumavhidhiyo ese panowoneka izwi iro pamwe nechinyorwa chake chepamutemo kuitira kuti tirege kupotsa chero mavhidhiyo maanotaura nezve Apple Watch system inoshanda. Ichi chinyorwa hachiwanikwe kuburikidza nekushandisa kunowanikwa muApp Store, asi isu tinofanirwa kuenda kune yekuvandudza portal.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Chinyorwa chepamutemo chemavhidhiyo eiyo yapfuura WWDC 2016 yave kuwanikwa